Jubbaland oo ugu Baaqday Dowladda Soomaaliya inay soo farageliso Xiisada ka taagan Beledxaawo – STAR FM SOMALIA
Maamulka Jubbaland ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka inay kala hadasho dowladda Kenya darbiga ay ka dhiseyso xuduuda, kaddib markii qeyb ka mid ah darbiga ay dhiseyso ay gudaha u soo gelisay degmada Beledxaawo.
Xiisad u dhaxeysay dadka deegaanka iyo Ciidamada Kenya ayaa maalmahan ka taagnaa Beledxaawo, iyadoo Ciidamada Kenya ay bilaabeen inay qeyb ka mid ah degmada Beledxaawo ay mariyaan dhankooda.
Wasiirka Amniga Jubbaland C/rashiid Janan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray degmada Beledxaawo, si uu u qiimeeyo cabashada shacabka iyo muranka ka taagan darbiga ay Kenya ka dhiseyso xuduuda.
Waxaa uu sheegay in shacabka deegaanka uu kala hadlay inay is dejiyaan, isla markaana wax walba uga dambeeyaan dowladda Soomaaliya, waxaana uu ugu baaqay dowladda inay soo farageliso arrimahan.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka doonayaan inay kenya kala hadlaan arrintan, lana xaliyo, isagoo xaqiijiyay in darbiga ay Kenya dooneyso inay ka dhisto xuduuda uu soo gaaray qeyb ka mid ah Beledxaawo.
Waxaa uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynaha Jubbaland oo iskaashanaya ay arrintan kala hadli doonaan dowladda Kenya.
“Dhul Soomaaliya ay leedahay cid kale in aanay qaadato ma ogolin, waxaa codsanayaa in arrintan dowladda looga dambeeyo, dowladda ay ka wada hadleen iyaga iyo kenya oo aan ka xaajoono, maadaama deris aynu nahay”ayuu yiri Wasiirka Amniga Jubbaland.
Banaan baxyo rabshado watay ayaa todobaadkan ka dhacay Beledxaawo, kaddib markii shacabka deegaanka ay ka hor-yimaadeen isku dayga ciidamada Kenya ku doonayeen inay ku burburiyaan guryo ku yaala Beledxaawo oo u dhow halka Kenya ay ka dhiseyso Darbiga.